Floating Fish Feed Extruder စက်စျေးနှုန်းအစာအလုံးလေးများ
စွမ်းရည်:400-500ကီလိုဂရမ် / နာရီ
floating ၏ဤအမျိုးအစား ငါးအစာကျွေးစက် extruder စက် ငါးအမျိုးအစားများအတွက်စိုစွတ်စေသောနည်းလမ်းအမျိုးအစားအစာဖြူထုတ်စက်စက်တွင်ပါ ၀ င်သည်, အရာကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကြီးမားသောအစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအတွက်အထူးပြုသည်, ငါတို့သည်လည်းအခြားအမျိုးအစားရှိသည် ငါးအစာတောင့်စက် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှုန်းအိမ်သုံးနှင့်အသေးစားလယ်ယာ use.as သည်,ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်များမည်မျှများများထုတ်လုပ်ရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာကျွေးခြင်း extrusion စက်
0.9-12mm မှအချင်းတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များထုတ်လုပ်နိုင်သည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရန်သက်ဆိုင်သည်, ငါးအစာတောင့်, ပုစွန်အစာနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်အစာ,ရေပေါ်အမျိုးအစားငါးအစာကျွေးခြင်း extruder စက်မှလွဲ။, ကျနော်တို့အမျိုးအစားနစ်မြုပ်ရှိသည် တောင့်စက်ကိုအစာကျွေး နစ်မြုပ်လုံးလေးများအောင်သည်.
မှတ်ချက်:ဒီ aqua ငါးအစာကျွေးခြင်း extrusion စက်ငါးအစာကျွေးနိုင်ပါတယ်,ပုစွန်စာကျွေးခြင်း,ငါးအစာကျွေးသည်,ရွှေငါးအစရှိသည့်ငါးမျိုးစုံနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာများဖြစ်သည်
စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာထုတ်စက်ကိုအများအားဖြင့်ငါးကဲ့သို့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအစာတောင့်များထဲသို့အစေ့များထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်း, ကြောင်, ခွေးနှင့်စသည်တို့. ငါးအစာဖြန့်ဖြူးသည့်အလုပ်တွင်အသုံးပြုသောဂျုံစေ့များသည်ဂျုံကဲ့သို့ဖြစ်သည်, ပဲပုပ်, ကိတ်မုန့်နှင့်အခြားကျန်ရှိသော, ထို့အပြင် pellet extruder စက်မှထုတ်လုပ်သည့် puffing သည်လုံး ၀ မဖျက်သိမ်းဘဲရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မျောပါနိုင်သည်။ 12 နာရီ. စိုစွတ်သောအစာကျွေးသော extruder စက်သည်အများအားဖြင့်အလတ်စားနှင့်အကြီးစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ငါးမွေးမြူရေးခြံများတွင်ဖြစ်သည်. အကြီးစားအရည်အသွေးလုံးလေးများထုတ်လုပ်မှုသည်, ဒါကြောင့်စိုစွတ်သောအမျိုးအစား feed ကို extrusion စက်ကိုရွေးချယ်ဖို့အမြတ်အစွန်းသည်
ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးစက် extruder စက်၏အားသာချက်များ
4.အလိုအလျောက် floating ငါးအစာ extruder စက်အဘို့ရေထဲမှာမျောနိုင်ပါတယ် 12 နာရီ.
5.ဤ puffing feed extrusion machine သည်အစာအမျိုးမျိုးနှင့်အစာကြေလွယ်သောအစာအမျိုးမျိုးသောတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များထဲသို့အမျိုးမျိုးသောအနည်များကိုစွန့်ပစ်နိုင်သည်.
6. ငါးအစာတောင့်ပြုလုပ်ရန်သာမက၊, ဒါပေမယ့်လည်းခွေးအစာကျွေးလုံးလေးများအောင်များအတွက်သင့်လျော်သော, ကြောင်, ငှက်
ဒီငါးအစာတောင့် extruder စက်ကထုတ်လုပ်ပြီးပြီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ
Fish Feed Pellet Extruder ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်: ခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်စက်နှင့်စိုစွတ်သောငါးအစာထုတ်စက်. ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားနှင့်စိုစွတ်သော pellet feed extruder တို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်လက္ခဏာများ:
1. ခြောက်သွေ့သောငါးအစာဖြူထုတ်စက်သည်စိုစွတ်သောလေအေးပေးစက်ကိုတပ်ဆင်ထားစဉ်ရေနွေးငွေ့စက်ကိုမလိုအပ်ပါ၊ ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသည်. ထို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့သောငါးအစာတောင့်ထုတ်စက်သည်စျေးသက်သာပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်
2. စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာတောင့်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအစာတောင့်သည်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည်။ အကြောင်းမှာပစ္စည်းသည်ခြောက်သွေ့သော extruder နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ပါကအေးစက်။ ရောနှောနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။.
3. စိုစွတ်သောအမျိုးအစား၏စွမ်းရည်သည်ခြောက်သွေ့သောအစာတောင့်ထုတ်ယူသည့်စက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်, ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာ extrusiong စက်သည်ကြီးမားသောအစာတောင့်စက်ရုံအတွက်သင့်တော်သည်။ ခြောက်သွေ့သောငါးအစာတောင့်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားသုံးစွဲသူသို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက်စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်သည်။.
Floating Fish Feed Extruder လုပ်ငန်းစဉ်
ကုန်ကြမ်းအစာကျွေး device ကိုသို့စလှေတျသောအခါ, သူတို့ကကုန်ကြမ်းအပြည့်အဝချက်ပြုတ်နှင့်ပိုးကင်းစေနိုင်သောမြင့်မားသောဖိအားနှင့်အပူချိန်နှင့်အတူဝက်အူရိုးအားဖြင့်ဖိလိမ့်မည်. ထိုအခါဖိပစ္စည်းပစ္စည်းမှိုပုံဖော်ခြင်းဖြင့်လုံးလေးများသို့ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်. ထို့နောက်ဖြတ်တောက်သောကိရိယာသည်လိုအပ်သည့်အတိုင်းဖွဲ့စည်းထားသောလုံးလေးများကိုမတူညီသောအရှည်များသို့ဖြတ်ပစ်လိမ့်မည်.
ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားနှင့်စိုထိုင်းသောအမျိုးအစား extrududer အကြားကွာခြားချက်
2. စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာထုတ်ယူသည့်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစာတောင့်သည်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခြောက်သွေ့သော extruder နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပစ္စည်းသည်အေးစက်။ အေးစက်စက်တွင်ရောနှောနေသည်။.
3. ခြောက်သွေ့သောအစာကျွေးသော extruder စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်စိုစွတ်သောငါးအစာဖြူထုတ်သည့်စက်ထက်နိမ့်သည်, ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးကျသည်
မော်ဒယ် စွမ်းရည် (t / h) အဓိကပါဝါ အစာကျွေးပါဝါ ဝက်အူအချင်း စွမ်းအင်ဖြတ်တောက် အေးစက်ပါဝါ
DSP60 0.15-0.20 15kw 0.4kw 60မီလီမီတာ 0.4kw 0.37kw
DSP70 0.30-0.4 18.5kw 0.75kw 70မီလီမီတာ 0.4kw 1.1-1.5kw
DSP80 0.40-0.5 22kw 0.75kw 80မီလီမီတာ 1.5kw 1.5-2.2kw
DSP90 0.50-0.6 37kw 1.1kw 90မီလီမီတာ 2.2kw 2.2-3.0kw
DSP120 0.7-0.8 55kw 1.1kw 120မီလီမီတာ 2.2kw 2.2-3.0kw
DSP135 1.0-1.2 75kw 1.5kw 135မီလီမီတာ 3.0kw 3.0-4.0kw
DSP160 1.8-2.0 90kw 2.2kw 155မီလီမီတာ 3.0kw 4.0kw
DSP200 3.0-5.0 132kw 2.2kw 195မီလီမီတာ 4.0kw 5.5kw
ဒီငါးအစာတောင့် extruder စက်ကထုတ်လုပ်ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးပြီးဆုံး
Floating Fish Feed Extruder စက်များအတွက်အပိုပစ္စည်းများ
♦ ဝက်အူလက်အင်္ကျီဆောက်လုပ်ရေးချမှတ်, သောရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်ရေအေးနှင့်အတူထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်, အရှင် extruding အပူချိန်ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်.
♦ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဖြတ်တောက်နိုင်သောယန္တရားသည်ဓါးများကိုကောင်းသော elasticity ဖြင့်အသုံးပြုသည်, အရာနူးညံ့သောသေပန်းကန်မှပူးတွဲပါလျင်မြန်စွာနှင့်တိကျစွာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်.
♦ ဝက်အူသော့ခလောက်နှင့်သေသည့်အရာများကိုလေဟာနယ်ကျဆင်းစေသောကုသမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်, ထို့အပြင်မြင့်မားသောအပြောင်းအလဲနဲ့တိကျစွာနှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌နှင့်ရှည်လျားသောအသုံးပြု။ အသက်ရှည်ရှိသည်.
မြင့်မားသောဖိအားကြောင့်, extruders ၏စည်အတွင်းရှိညှပ်နှင့်ပွန်းပဲ့, စည်နဲ့တူအလွယ်တကူ - ဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများ, အခါအားလျော်စွာအစားထိုးရပါမည်ဝက်အူ. ကျွန်ုပ်တို့၏ extruders များသည် modular ဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလိုအပ်သလိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်. ထို့အပြင်, ငါးအစာတောင့်စက်တစ်လုံးတွင်လက်နှစ်ချောင်းပါ ၀ င်ပြီးအလွန်လွယ်ကူသောအပိုပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်ထားသည်, ဝက်အူတစ်ခု, ဖြတ်တောက်သောဓားတစ်ချောင်းနှင့်မှိုသုံးမျိုး.
feed ကို extruder စက်၏ဗီဒီယို